भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने मौका गुमाउन चाहन्नौं- पारस खड्का | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल जाने टु वे टिकट मिलाईदिनुस राजदुत ज्यु ?
पोखरामा अर्को बन्जी जम्प सञ्चालनमा आउने →
२९ साउन, पोखरा । एसिया कप छनोटको तयारीमा जुट्नु अघि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का पोखरामा थिए । उनी आगामी कात्तिकमा हुने पोखरा प्रिमियर लिगका लागि बन्दै गरेको क्रिकेट मैदान अवलोकन गर्न आएका हुन् । पोखराबाट फर्किएपछि पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको टोली एसिया कपको तयारीमा जुट्दैछ । मलेसियामा २९ अगस्टदेखि हुने एसिया कप छनोटमा विजेता बन्न सके भारत, पाकिस्तानजस्ता क्रिकेटका शक्तिशाली देशसँग खेल्ने मौका भएकाले यसलाई कुनै हालतमा गुम्न नदिने कप्तान खड्का बताउँछन् ।
हङकङ, युएई, सिंगापुर, ओमान र मलेसिया सबैलाई हराएर एसिया कप खेल्ने सपना देखिरहेको नेपाली टिमले कसरी तयारी गर्दैछ ? यस’bout टिमका कप्तान पारस खड्कासँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीः
नेसनल/इन्टरनेसनल २/३ वटा प्राइभेट लिग नेपालमा भइरहेका छन् । अगामी दिनमा चाहिँ टी–२० होलान् । यदि भोलि क्रिकेट बोर्ड आउँछ अनि ५० ओभरको दुईदिवसीय, तीनदिवसीय फर्म्याटमा पनि हामी जानुपर्छ । पोखरा प्रिमियर जस्ता टुर्नामेन्टले चाहिँ एउटा क्रिकेटको माहोल बनाउँछ । यसले थप ऊर्जा थपिने छ । देश–विदेशका खेलाडी, प्रशिक्षण आउँदा यहाँका खेलाडी, प्रशिक्षक र दर्शकका लागि पनि त्यो एउटा मौका हुने छ । अनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पोखरा’bout छुट्टै सन्देश दिन्छ ।